Fijoroan’ny « Haute Cour de Justice » : Ny mpanongam-panjakana no hotsaraina voalohany -
AccueilRaharaham-pirenenaFijoroan’ny « Haute Cour de Justice » : Ny mpanongam-panjakana no hotsaraina voalohany
Andry Rajoelina sy ny forongony no hotsarain’ny Haute Cour de Justice voalohany. Satria nahoana: izy no Filoham-panjakana velon’aina tra-tehaka tamina fanonganam-panjakana tamin’ny 2009, ka nahafatesana malagasy maro sy naharavana fananan’olona marobe ary nitarika izao fahantran’i Madagasikara izao. Na nanao izay ho afany aza ny mpitondra ankehitriny, dia henjana ny nanarina ny takaitra navelan-dRajoelina sy ny forongony.
Mbola velon’aina ihany koa ny Filoham-pirenena Marc Ravalomanana, niharan’izany fanonganam-panjakana izany, ka tsy misy antony tokony tsy handehanan’izany raharaha izany. Afaka miatrika tsara ity raharaha ity izany Andry Rajoelina nanongam-panjakana sy Marc Ravalomanana naongana tamin’izany. Vaindohan-draharaha amin’ny andraikitra sy adidy raisin’ireo mpikambana ao amin’ny HCJ io fitsarana io, satria dia miankina amin’io ny hametrahana ny fanorenana ifotony ilain’ny firenena.
Rehefa mahatsapa tena ny mpitondra teo aloha fa tsy ambonin’ny lalàna intsony izy, dia foana ho azy ny kolontsaina tsimatimanota nananany hatramin’izay. Ny tsy fisian’ny Fitsarana natao tamin’ireo mpanongam-panjakana tokoa no mbola mahatonga azy ireo mikasa hanao sorona fanindroany ny Malagasy sy hamotika fanindroany an’Antananarivo.
Hatramin’ny androany tokoa mantsy, dia mbola mandeha ny feo fa misy mikononkonona fanonganam-panjakana any ambadika any, ary mandeha mitsaitsaika mitety toby miaramila sy mikasa hamerina ny fomba ratsy teo aloha.
Ny fototr’izao olana misy eto amin’ny firenena izao, dia ny fisian’ireo mpanao politika tsy mieritreritra afa-tsy fanonganam-panjakana. Tsy ho tafarina na oviana na oviana i Madagasikara raha tsy fongorina aloha ireo tsimatimanota ireo.
Manoloana ny fanombohan’ny fanaterana antontan-taratasy filatsahan-ko fidiana anio, dia nanamafy ny talen’ny fiarovana anivon’ny HCC ny Kolonely Roger Luc raha azo tamin’ ny antso an-taribiy fa “andrim-panjakana ny HCC ka noho izany misy ny fepetra ...Tohiny